Dhibaatada Ciyaaraha Iyo Da'yarta - Macallinkiisa Ayuu Musaarico Ku Metey Oo Uu Dhaawacyo Gaadhsiiyey, Kaddibna Jeelka Ayaa Loo Taxaabay - Cadalool.com
Dhibaatada Ciyaaraha Iyo Da’yarta – Macallinkiisa Ayuu Musaarico Ku Metey Oo Uu Dhaawacyo Gaadhsiiyey, Kaddibna Jeelka Ayaa Loo Taxaabay
Arday dhigta mid ka mid ah dugsiyada sare ee dalka Maraykanka ayaa xabsiga loo taxaabay kaddib markii uu musaarico ku metelay macallin wax u dhigayey oo uu khilaaf ka dhex-dhashay.
Ardaygan oo lagu magacaabo Gianny Sosa ayaa toddobaadkan la hor keenay maxkamad ku taalla Miami, iyadoo lagu eedeeyey in macallinkiisa uu gacan u qaaday, dhaawacyana u geystay, isagoo isticmaalayey xirfadda legdinta oo uu kasoo dheegtay Randy Orton.
Sosa oo ay da’diisu tahay 18 jir ayaa waxa uu dhigan jiray dugsiga sare ee Miami Southridge Senior High School, halkaas oo ay boolisku ka kaxeeyeen markii uu qoorta qabtay macallinkiisa isla markaana uu dhulka iskula tuuray si la mid ah sawirka sare oo ah xiddiga musaaricada ee Randy Orton.
CBS Miami ayaa barteeda Twitterka soo dhigtay muuqaalka ay duubeen kamaradaha iskuulka ee muujinaya sida uu falku u dhacay.
Muuqaalkaas ayaa la horkeenay maxkamadda Miami, taas oo go’aan ka gaadhi doonta xukunka uu mutaysan doono ardaygan dambiilaha ah.
Qoyska uu ka dhashay 18 jirkan ayaa sheegay in wiilkoodu uu yahay qof dhaqan iyo asluub wanaagsan, falkan lagu eedeeyeyna uu layaab ku noqday.
“Waxay ila tahay in lagu xukumayo wax aanu u qalmaynin. Walaalkay waa wiil wanaagsan oo waxa uu sameeyeyna ay ka ahaayeen ciyaar kaliya, dadkuna uu kaga farxinayey.” Sidaas waxa tidhi Mike Sosa oo la dhalatay ardayga.
“Walaalkay maaha budhcadda jidadka, mana aha mid waxan caadaystay.” Ayay ku dartay.